Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • News News
Hiverina indray ny fizahan-tany rehefa miatrika zava-misy COVID-19 ny indostria
Home » Lahatsoratra » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Hiverina indray ny fizahan-tany rehefa miatrika zava-misy COVID-19 ny indostria
Tsy hita maso nefa mahafaty: COVID-19
Rehefa hitanao io dia tsy misy ny fanamby amin'ny fitazonana ny faritra madio sy hadio. Mitadiava sombina mainty eo ambony latabatra avy eo am-pananganana, bitro vovoka miafina eny an-joro izay tafavoaka ny banga, vatokely eny am-baravarankely izay tsy nosokafana nandritra ny herinandro maro, tasy divay teo amin'ny tapis tamin'ny fety omaly alina - tsy nisy olana… Andriamatoa. Madio, Lysol, mpanadio karipetra ary voavaha ny olana.
Fa ahoana ny COVID-19? Ny mitondra ny voa rehetra dia ny "vovoka" COVID-19 dia devoly tsy hitantsika. Tsy vitan'ny hoe mitsambikina haingana avy amin'ny olona iray mankany amin'ny iray hafa ny viriosy, fa miraikitra amin'ny sehatra miharihary rehetra hatrany amin'ny fitaovana fananganana sy lamba hatrany amin'ny olona sy ny biby fiompy. Ny kalitaon'ny "clinging" an'ny COVID-19 dia mamorona phobia ankapobeny, miavaka amin'ny tahotra tsy mitsaha-mitaha amin'ny fitanana varavarana, lalantsara, faucets rano, flusher fidiovana, seza bus, birao birao, kitendry solosaina, sofa fandraisam-bahiny, fork, antsy, sotrokely, lovia, lamba latabatra ary olona.
Raha ny filazan'ny virologista Neeltje van Doremalen (New England Journal of Medicine), dia mijanona mandritra ny 19-2 andro ny viriosy COVID-3 avy amin'ny plastika ka hatramin'ny vy tsy misy fangarony, fitaovana efa niasa imbetsaka, nandritra ny am-polony taona maro, tany amin'ny hotely, trano fisakafoanana, manintona, ary ireo rafitra "namboarina" hafa rehetra eto ambonin'ny planeta. Ny viriosy dia afaka mijanona ho mavitrika amin'ny baoritra mandritry ny 24 ora ary, na dia maty amin'ny varahina aza ilay viriosy dia velona izy ary maharitra 4 ora.
Loza anaty trano
Trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fisarihana, trano fanaovana sarimihetsika, efitrano fandraisam-bahiny sy kianja, seranam-piaramanidina ary seranam-piaramanidina, raha toa ka heverina ho faritra mampidi-doza ho an'ireto toerana voahidy ireto ny foibem-panidiana ho an'ireo COVID-19. Misy porofo (avy amin'ny hopitaly), fa ireo marary ao amin'ny efitrano fitokana-monina izay nandraisan'ny marary SARS CoV 2 fikarakarana virus dia nahitana ireo buggers tamin'ny santionan'ny rivotra / ambonin'izy ireo. Na ireo mpanangona rivotra izay mihoatra ny 6 metatra miala ny marary aza dia nahatsikaritra ilay viriosy, ka nametraka fanontaniana raha efa ampy ny torolàlana momba ny lavitra eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny hisorohana ny fihanaky ny aretina ary raha toa ka manaparitaka ny viriosy ireo singa HVAC ankehitriny napetraka ao amin'ny hotely, trano fisakafoanana sns. poti na manaparitaka azy ireo manerana ny toerana. Araka ny filazan'ny mpahay siansa momba ny aerosol Lidia Morawska (University of Technology ao Queensland, Australia), “Raha ny sain'ny mpahay siansa miasa momba izany dia tsy misy isalasalana fa niparitaka teny amin'ny rivotra ilay viriosy…. Tsy misy dikany izany. ”
Tamin'ny fanadihadiana iray nataon'ny Oniversiten'i Hong Kong, ny mpikaroka dia nahita rhinovirus, gripa ary coronavirus an'ny olombelona ao amin'ny vongan-tsofina sy aerosol, ary nanapa-kevitra fa ny sarontava fandidiana ataon'ny marary marary dia mampihena ny fitiliana coronavirus amin'ny endrika fampitana roa. Fikarohana iray hafa tany amin'ny hopitaly Wuhan, China, no nahitana fa ny hetsiky ny mpiasa, ny fanadiovana ny gorodona, ary ny fanesorana ireo fitaovam-piarovan-tena dia afaka mamindra ny viriosy amin'ny alàlan'ny famelomana ireo aerosol voan'ny virus.
Mahaliana ny manamarika fa ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia "mieritreritra" fa ny fifindran'ny rivotra dia "mety ho azo atao" mandritra ny fomba fitsaboana sasany (izany hoe ny fidirana an-tsokosoko na ny fisotroan-tsokosoko misokatra), fa kosa manolotra “fitandremana” ary manome soso-kevitra hanadihady bebe kokoa… ”mba fantaro raha azo atao ny mamantatra virus COVID-19 amin'ny santionan'ny rivotra avy amin'ny efitranon'ny marary izay tsy misy fomba fitsaboana na fitsaboana manohana izay miteraka aerosol mitohy. Mampatsiahy ahy ilay cliché ity, "Tapa-kevitra aho - aza afangaro amin'ny zava-misy aho."
Na dia misy aza ny mety fa marina ny WHO ary diso ny mpahay siansa hafa, ny politikam-bahoaka, ary koa ireo mpiara-miombon'antoka mandray vahiny, ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia tokony "diso" eo am-pitandremana, manome toromarika ny mpiasa sy ny vahiny rehetra manaova saron-tava ary araho ny torolàlana momba ny halaviran'ny fiaraha-monina. Tsara kokoa ho an'ny olon-drehetra raha toa ka misaron-tarehy ny olona rehetra mifanerasera amin'ny habakabaka rehefa eny ivelany izy ireo.
Avy aminao mankany amiko ka hatrany aminao sy ny anao
Misy fomba roa farafahakeliny hidiran'ny viriosy ao amin'ny vatantsika: autoinoculation sy airborne. Ny olona iray mikasika ny faritra maloto (heverina ho làlana faharoa ho an'ny aretina) raha toa kosa ny fifindran'ny rivotra avy eo, izay mitsoka fantsona aorian'ny fitsofohan'ny olona iray na ny kohaka dia toa mahazatra kokoa. Misy porofo manamarina fa ny fitafiana dia mpanamora ny fifindran'ny otrik'aretina ary mijanona eo amin'ny lamba ny rano mitete.
Adidy amin'ny fikarakarana: fahazoana madio sy azo antoka
Mba hampihenana ny fahafahan'ny COVID-19 hiparitaka amin'ny olona tsirairay, ny mpiaramiasa amin'ny hotely, ny dia, ny fizahan-tany ary ny indostria mifandraika amin'izany dia manana adidy hamorona tontolo iainana izay ananan'ny vahiny mampihena ny fotoana mety hahitana aretina.
Ity manaraka ity dia manome soso-kevitra momba ny rafitra, ny fomba fanao ary ny vokatra izay afaka mitarika ny làlan-kizorana fizahan-tany / fizahan-tany mahasalama sy madio kokoa.
Miaina. Andraso 60 Segondra
Prof Gabby Sarusi
Nosoratan'ny Profesora Gabby Sarusi, israeliana mifandraika amin'ny oniversite Ben-Gurion any Negev, ity fitsapana fitsapana ny valanaretina coronavirus ity dia mamaritra raha manana virus ianao na tsia ao anatin'ny iray minitra. Ny fitsapana elektro-optika 60 segondra dia mijery santionan'ny orona, tenda na fofonaina izay mamantatra ireo mpitatitra asymbomatika sy voan'ny virus COVID-19 izay manana marina mihoatra ny 90 isan-jato. Azo apetraka amin'ny teboka fidirana eran-tany amerikana ny rafitra (izany hoe seranam-piaramanidina, tobin'ny fitsangantsanganana, gara) raha vantany vao ankatoavin'ny US Food and Drug Administration. Ny kitapom-panadinana tsirairay dia omena $ 50 eo ho eo, ambany lavitra noho ny fanandramana, ny valin'ny valiny polymerase mifototra amin'ny laboratoara (PCR).
Ahenao ny fifandraisan'ny olombelona
Ny trano fandraisam-bahiny dia zatra mampiasa robot amin'ny teboka lehibe amin'ny hotely mba hampihena ny fifandraisan'ny vahiny. Aloft Hotels dia nanolotra robot tamin'ny 2016 ary nitety ny tany manontolo izy ireo, ary nanatitra entana.
Nanomboka nampiasa Robot Connie i Hilton (nantsoina taorian'ny Mpanorina trano fandraisam-bahiny, Conrad Hilton) tamin'ny 2016. Ny Crowne Plaza dia manana robot mpanatitra (San Jose Silicon Valley) izay manatitra snacks, toiletries, ary kojakoja hafa rehefa manara-maso ny fampiasana herinaratra, miverina amin'ny famandrihana. tondroy rehefa mila miverina miverina izy. Ny Henn na Hotel (Sasebo, akaikin'ny Nagasaki, Japon) dia manana robot eo amin'ny latabatra fandraisam-bahiny hiarahabana ny vahiny, raha robot hafa kosa mifehy ny fanafanana sy ny jiro ary manome ny mombamomba ny toetrandro. Ny robot Yotel Hotel dia manangona sy manatitra enta-mavesatra ho an'ny efitrano, ary ny Hotel EMC2 (Chicago, Il) dia manatitra lamba famaohana ary fitaovana hafa, manafaka ireo mpiasa hiantsoroka andraikitra hafa.
Smart Phones dia marani-tsaina tokoa
Ny Front Desk raha "fantantsika" dia natsipy tao anaty fitoeram-pako tamin'ny tantaran'ny hotely. Tsy ilaina intsony ny birao fandraisana, Concierge, na mpiasan'ny Tour / Entertainment satria ireo asa rehetra ireo dia atrehana amin'ny alàlan'ny Smart Phone an'ny mpitsidika. Ny vahiny dia tsy mila mahita mpiasa iray na mikasika faritra amboniny mankeny amin'ny efitranony. Ho fanampin'izay, ny fangatahana rehetra, manomboka amin'ny martini's ka hatrany amin'ny servieta fanampiny dia halefa amin'ny alàlan'ny findainy ary alefan'ny robot.
Hamarino amin'ny alàlan'ny smartphone.
Fidirana ao amin'ny efitrano tsy misy keyless.
Rafitra fisakafoanana nomerika tsy misy Touch (trano fisakafoanana, hotely, tsipika fitsangantsanganana).
Tsy misy fanaraha-maso lavitra ny fahitalavitra mikasika (avy amin'ny fampiharana finday avo lenta).
Ny trano fandroana dia tsy ho voakitikitika miaraka amin'ny faucets rano alefa amin'ny pedal na elektronika, ny mari-pana amin'ny fandroana dia hifehezana amin'ny alàlan'ny teknolojia, ary ny trano fidiovana (Toto).
Ny trano fidiovana ampahibemaso dia mety ho very tanteraka ny varavarany, soloina trano fidiovana miendrika S izay tsy misy varavarana fidirana fa kosa mampiasa endrika miolakolaka mba hitazomana ny fivarotana tsy miankina. Ny loos rehetra dia mety hanjary tsy hanavakavaka ny lahy sy ny vavy mandritra ny hetsika fivezivezena mafy izay tokony hiandrasan'ny vehivavy vondrona lava be nefa ny efitranon'ny lehilahy dia foana foana.
Raha tena matotra amin'ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny mpiasa ireo hotely sy sambo fitsangantsanganana dia azon'izy ireo atao ny manampy ny teknolojia fidiovana ara-pahasalamana marina noforonin'i Sanji Gambhir, MD, PhD. Ity fitaovana tsy manam-paharoa ity dia afaka mahatsapa famantarana maro amin'ny aretina amin'ny alàlan'ny famakafakàna otrikaretina mandeha sy mandeha amin'ny seza.
Teknolojia fanalavirana ara-tsosialy
Ny teknolojia natao hampitandremana ny mpiasa sy ny vahiny rehefa mifanakaiky loatra izy ireo dia vonona hampidirina amin'ny seranam-piaramanidina, hotely, sambo fitsangantsanganana ary ny manintona. Manomboka amin'ny fitaovana izay “maheno” ny fitaovan'ny olon-kafa, hatrany amin'ny haitao ultra-wideband izay mamela ny fandrefesana ny halavirana marina eo anelanelan'ny fitaovana misy fomba mora vidy hitazonana antsika hisaraka. Ho fanampin'izany, ny Bluetooth Low Energy (ampiasaina amin'ny headphone sy mpandahateny azo entina) dia mamoaka fampahalalana lavidavitra tsy tapaka tsy tapaka ary ny feo kosa dia azo ampiasaina hamaritana ny halaviran'ny hafa (mihevitra ny ramanavy) izay ahitan'ny akoako ny sakana eny an-dàlana. Ireo akanjo azo entina (izany hoe, brasele na peratra) dia azo ampiana amin'ny halavirana ara-tsosialy ary ny programa entina miasa dia azo alamina hamandrihana rehefa misy mpiasa sy vahiny eo anelanelan'ny 6 metatra.
Robots manolo ny mpiasa
Mifanaraka amin'ny filan'ny tontolo iainana lavitra sy ara-pahasalamana, ny mpitsangatsangana dia maniry fotoana vitsy sy vitsy hifaneraserana amin'ny hafa, ka mahatonga ny robot ho fanampin-tsarimihetsika feno amin'ny hotely, serivisy fitsangantsanganana, serivisy fisakafoanana ary fisarihana.
Fanaterana robotika (valizy, kojakoja, sakafo, zava-pisotro, lamba firakotra). Ny robot dia afaka mitaingina ascenseur, miantso efitrano rehefa tonga ny vahiny; sorohy ny sakana amin'ny alàlan'ny sensor; tafiditra ao anaty rafitra fitantanana fananana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko izay manara-maso ireo asa sy zava-bita.
Ny robot manamboatra lalana dia mitondra ny vahiny mankamin'ny efitranony.
Serasera robotic natao ho azy: mamantatra ireo famantarana ny tarehy, vatana ary ny feo; manome valiny amin'ny fanontaniana manokana momba ny fananana, manome torolàlana, mitantara tantara, dihy ary sary ho an'ny selfie.
Ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Seoul Incheon, Airstar (LG Electronics) maka sary, mamaly ny anarany, manamarina ny tapakilan'ny mpandeha fiaramanidina ary mitondra azy ireo mankamin'ny vavahady fiaingany. Airstar dia mahay teny anglisy, korean, sinoa ary japoney. Ao amin'ny efitrano fahatongavan'i Airstar dia mamaky ny kaody bara amin'ny tag ny valizy, mitarika ny mpandeha ho any amin'ny faritra fitakiana entana, ary manolotra fampahalalana momba ny fitaterana hanampiana ireo mpitsidika hahatratra ny toerana alehany.
HVAC Systems vs. COVID-19
Hotely, sambo fitsangantsanganana, trano fisakafoanana, kianja filalaovana, ivon-toeran'ny fihaonambe ary trano fandraisam-bahiny hafa, mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mitady fomba hampihenana ny fiparitahan'ny COVID-19 mifantoka amin'ny rafitra HVAC amin'ny alàlan'ny fandrika, fanalefahana ary / na fampidirana ilay virus. Ny rivotra dia manampy amin'ny fanalefahana amin'ny alàlan'ny famoahana ny trano amin'ny rivotra ivelany amin'ny taha izay tsy maharitra amin'ny fifehezana ny fampiononana. Ny fanatsarana nohatsaraina dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanavaozana ireo sivana mankany amin'ny naoty MERV avo kokoa.
Ho an'ny famonoana ny viriosy, teknolojia roa no voaporofo fa mahomby amin'ny pathogens: hazavana UVC (fanadiovana ny tany na fanadiovana coil - amin'ny hery avo lenta izay mampihena ny viriosy rehefa mivezivezy amin'ilay faritra ao amin'ilay rafitra) sy ny ionisation bipolar izay miteraka vokatra tsara sy ratsy. ion izay mivalona amin'ny alàlan'ny rafitra ary mankamin'ny habaka ampiasainy mba tsy hampiasana viriosy.
Misy ho avy ve?
Amin'izao fotoana izao ny fifanakalozan-kevitra momba ny dia dia feno tsy fahatokisana sy tahotra. Misy toky fa hisy hazavana amin'ny faran'ny tonelina, amin'ny farany, fa eo am-pelatanan'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, ny mpitantana orinasa, ny mpahay siansa mpikaroka ary ny hafa mieritreritra fa manana ny valiny izy ireo. Na izany aza, marina ny nataon'i Pogo rehefa nilaza izy hoe: "Hitanay ny fahavalo ary izy isika." (Walt Kelly, 22 aprily 1970).
Mpikaroka sy akademika vitsivitsy no nandinika ny fanamby ankehitriny ary raha tsy / mandra-pisiana vaksinina hisorohana ny COVID-19 tsy hanafika ary / na ny fitsaboana hita hanampiana antsika handresy ny aretina, misy dingana vitsivitsy sarobidy azontsika mpanjifa ampiharina amin'ny fiezahana hihazona fahasalamana tsara.
Ny vaovao tsara dia mora sy mora ny dingana; ny vaovao ratsy dia, misaotra ireo olona monina any Washington, DC ary ny Trano Fotsy izay mampiasa ny fahaizany mifandraika amin'ny daholobe mba hamindra ny COVID-19 avy amin'ny olan'ny fahasalamana sy ny fahasalamana ho lasa adihevitra ara-politika, dia nanjary metaphysical ny dingana mankany amin'ny fanalefahana fanehoan-kevitra. Ny voka-dratsy ateraky ny fanaovana politika amin'ny olan'ny fahasalamana dia mampisara-bazana ary ny fanapahan-kevitra ny hisaron-tava (na tsy hanao) saron-tarehy na dia mitazona farafahakeliny 6 metatra aza, dia mifototra amin'ny politika fa tsy amin'ny torohevitr'ireo mpitsabo sy mpahay siansa.
Hifoha ihany ve ny mpitarika hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany amin'ny farany, ary hahatsapa fa ny fanambarana an-gazety dia tsy hanova ny fomba fijerin'ny mpanjifa mikasika ireo loza mety hitranga amin'ny fahasalamana amin'ny dia? Mandra-pahatongan'ny fiovana eo amin'ny sehatry ny ahitra eo amin'ny sehatry ny indostria: fampidirana fitaovana fananganana anti-mikraoba vaovao, fampiasana lamba manohitra mikraoba amin'ny zava-drehetra (izany hoe fanaka, lambam-pandriana, fanamiana mpiasa), fampidirana rafitra HVAC nohavaozina, teknolojia tsy mifandray. avy amin'ny famandrihana amin'ny alàlan'ny fizahana, robot ary fidirana amin'ny dokotera / mpitsabo mpanampy amin'ny alàlan'ny TeleMed na fanampiana ara-pahasalamana hafa rehefa misy ny vonjy taitra - hisalasala ny handao ny tranony sy ny faritra mampionona azy ny olona.
Toerana iray mamirapiratra no toa ny dia an-trano. Na fiara, na van na RV ny dia, ny fialantsasatra feno tena dia hanome ny fiovan'ny toerana irina mafy, ary ny toerana voafehy natolotry ny fitaterana manokana dia manome fanamaivanana amin'ny tahotra ny sidina sy ny fampiasana fitateram-bahoaka.
Ny dingana mankany amin'ny dia iraisampirenena dia mety hanomboka amin'ny namana sy fianakaviana maniry fatratra hahita ny olon-tiany aorian'ny volana maro an-terivozona ara-tsosialy. Ireo "mpisava lalana" ireo dia hahita trano honenana amin'ny alàlan'ny B & B eo an-toerana satria tsy hitany fa azo antoka sy madio ara-pahasalamana ny tontolon'ny hotely.
Mety mila taona maro vao miverina amin'ny ambaratonga 2019 ny dia; angamba ny lesona nianarana teo anelanelan'ny taloha sy ankehitriny dia hahatonga ny onjan'ny dia ho iray izay "vaovao sy nohatsaraina".